Zava-manahirana ny tanora (Problèmes de jeunes)
Ny fahamarinana, ao Aminy no ahitako azy. Ao amin’ny Baiboly, izay fanambaràn’Andriamanitra, no andrenesako an’i Jesoa milaza hoe: “Izaho no làlana sy fahamarinana ary fiainana; tsy misy olona mankany amin’ny Ray, afa-tsy amin’ny alalako” (Jaona 14:6).
Ny fihavanana amin’Andriamanitra? Azonay izany amin’ny alalan’i Jesoa Kristy (Romana 5:1). Izy no nahatanteraka izany tamin’ny nahafatesany teo amin’ny hazofijaliana, ary Izy no manolotra izany: “Fa Izy no fihavanantsika...ary tonga Izy ka nitory teny soa mahafaly milaza fihavanana taminareo izay lavitra” (Efesiana 2:14, 17). Raha nandao ireo mpianany Izy, dia nilaza hoe: “Fiadanana no avelako ho anareo, ny fiadanako no omeko anareo; tsy tahaka ny fanomen’izao tontolo izao no fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo” (Jaona 14:27).
Ny fitiavana marina? Tsy hitako afa-tsy ao amin’i Jesoa Kristy izany: olona izay mahalala ahy tanteraka, nefa dia tia ahy ihany, olona izay tsy ho tapitro ny fandeferany sy ny famelany heloka, koa noho izany, dia olona azoko itokisana tanteraka. “Isika tia, satria Izy efa tia antsika taloha” (1 Jaona 4:19).
Ry tovolahy, ry tovovavy, aza miandry intsony fa manatòna an’i Jesoa, Ilay Mpamonjy: “Indro, ankehitriny no andro famonjena” (2 Korintiana 6:2). Hoy Jesoa: “Mankanesa atỳ amiko, ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa Izaho no hanome anareo fitsaharana” (Matio 11:28)